Rafitra fanamafisam-peo, fitaovana fampidirana rivotra, Vovona fanamafisam-peo - AIR-ERV
Xiamen AIR-ERV Technology Co., Ltd. dia manam-pahaizana manokana amin'ny Fikarohana sy fampivelarana ary famokarana rivotra mankany amin'ny rafi-pamerenana hafanana amin'ny rivotra nanomboka tamin'ny taona 1996 niaraka tamin'ny tranony manokana.Fitaovana mandroso sy manaraka ny ISO 9001: 2015 sy ny fiarovana ny tontolo iainana Rohs, mahazo ISO9001: 2008 Quality System Certification sy CE fanamarinana sns. voninahitra hanomezana tolotra OEM na ODM ho an'ny orinasa malaza maro, toa ny GE, Daikin, Huawei sns., ary hahazo laza malaza any an-trano sy any ivelany miaraka amin'ny vidiny avo lenta sy antonony. rivotra madio / madio / mahazo aina ary mamonjy hafanana / angovo. Voakasiky ny COVID-19, ny ventilator fanarenana angovo fanadiovana miaraka amin'ny fanamafisam-peo UV dia malaza kokoa sy manan-danja amin'ny tranobe maitso. , fambolena, fiompiana, fanamainana, welding, boiler ary indostria hafa ho an'ny rivotra, fanarenana angovo, fampangatsiahana, fanamainana, dehumidification ary fanarenana hafanana. Raha manana fanontaniana na filàna ianao, tongasoa anay hifandray aminay, misaotra.
Ampidiro ny faritra
Fanarenana hafanana ERV ...
Fanamafisam-peo fanarenana hafanana ERV miaraka amin'ny mpanadio ERV Fanasitranana hafanana amin'ny alàlan'ny fanadiovana tsy vitan'ny mpanondrana hafanana miorina tsara mba hamerenana ny hafanana sy hitsitsiana herinaratra, fa hanampy koa ny sivana voalohany, sivana karbonika mavitrika ary sivana HEPA hanivana tsara ny vovoka, bakteria ary zavatra manimba eny amin'ny rivotra, ny fahombiazan'ny fanadiovana PM2.5 dia hatramin'ny 99,5%. Natao ho an'ny villa, sekoly, efitrano kafe, efitrano fivoriana, birao, hotely, laboratoara, KTV, klioban'ny fihenan-tena, sinema, lakaly, efitrano fifohana sigara ary zavatra hafa ...
Heat hafanana sy Ener ...
Ventilator fanarenana hafanana mahazatra sy angovo mahazatra dia rafitra rivotra ivoho ivon-toerana izay manome rivotra madio, manala rivotra efa bolo anaty trano ary mandanjalanja ny hamandoana ao anaty trano. Ankoatr'izay, azon'izy ireo ampiasaina ny hafanana azo avy amin'ny rivotra basi mba hampafana ny rivotra madio miditra amin'ny hafanana mahasalama. Tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny famoronana tontolo madio sy ahazoana aina manatsara ny fahasambaran'ny mpampiasa trano izany, fa mamerina indray ny angovo hamonjy herinaratra. Tsy voatery: alimo 1.Sensible ...
Double Way Ventilator - famatsian-drivotra sy rivotra entina miaraka amin'izay koa ny fantsona rivotra avo roa heny ampiasaina amin'ny famatsiana rivotra sy rivotra iainana amin'ny fotoana iray, afaka mamoaka rivotra maloto anaty izy rehefa misy rivotra madio any ivelany hanatsarana ny rivotra. Motera AC marika manana herinaratra ambany sy tabataba ambany. Switch knob mahazatra na mpanara-maso manan-tsaina safidy. Endri-javatra: 1. Fampiharana marobe: ny halaviran-drivotra dia 150 ~ 5,000 m³ / h, mety amin'ny sekoly, trano fonenana, efitrano fihaonambe, birao, hotely, laboratoara, fi ...
One Way Ventilator - manome rivotra na rivotra iainana Ny rivotra iray fomba ampiasaina amin'ny famatsian-drivotra na ny rafitra fanalefahana rivotra. Tsy voatery: 1.Moto DC marika na motera AC ho an'ny safidy. 2.Telo sivana sosona ho an'ny safidy. Misy sivana voalohany + sivana karbaona mavitrika + sivana HEPA hisorohana ny rivotra maloto, ny sivana HEPA dia afaka mampihena ny PM2.5 amin'ny fomba mahomby ary hahazoana antoka fa madio sy madio ny rivotra. 3.Standard knob switch na mpanara-maso manan-tsaina safidy. Endri-javatra: 1. Fampiharana marobe: ny halaviran-drivotra dia 50 ~ 5,000 ...
ERA Cross Flow Heat Exchanger Core Cross mikoriana ...
Ny hafanana miady amin'ny ERB Counter ...
ERC Enthalpy Heat Exchanger Core Ny hafanana ERC ...
Ny tombony sy ny fampiasa amin'ny exchanger hafanana entalpy taratasy avy any Xiamen AIR-E
1). Vita amin'ny taratasy fibre manokana miaraka amin'ny hafanana avo be, ny fahateren'ny rivotra tsara, ny fanoherana ny tendrony, ny fanoherana ny fahanterana, ny fanoherana ny ahitra sns. 2). Ny endriny dia ABS, tsara bika, tsy mora vaky, fotoana serivisy lava, mpomba ny tontolo iainana, tery ny rivotra madio, miantoka ny hamafin'ny sy tery ...
Ny tombony sy ny fampiasa amin'ny alàlan'ny alim-pamokarana hafanana avy any Xiamen AIR-ERV
1). Fiarovana ny tontolo iainana - ny fitaovana rehetra dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny ROHS / REACH sy ny fenitra nasionaly, izy ireo dia mpomba ny tontolo iainana. 2). Famolavolana matihanina - manana rindrambaiko famolavolana manokana hanomezana fahafaham-po ny fepetra miasa isan-karazany, ny tatitra momba ny vokatra miaraka amin'ny famaritana ary manome ny ...